1. ImgBurn maka Mac
3. ImgBurn BOOKTYPE Ntụgharị
4. Iji ImgBurn Ọkụ Files
> Resource> DVD> ImgBurn Alternative maka Windows-atụ aro
ImgBurn bụ maara nke ọma free DVD ọkụ software ji ọtụtụ ọrụ. Ma, ọ nwere ya ọghọm. Ị na-enyocha gburugburu n'ihi na a mma karịa ImgBurn ọzọ dị ka ndị ọzọ? Ugbu a ọ bụ oge iji chọta a mma DVD onye maka kọmputa gị.
My aro bụ Wondershare Video Converter Ultimate, nke bụ ike video na DVD ngwá ọrụ maka video akakabarede na DVD e kere eke. Ọ bụ nile-na-otu video ntụrụndụ ngwọta maka gị Windows na Mac. Dị ka ihe ezigbo ImgBurn ọzọ, o nwere ike arụzu ihe ndị a Imgburn aga-eme:
1. Ọkụ vidiyo na DVD maka play on n'ụlọ DVD ọkpụkpọ.
2. Ọkụ nkiri na ISO image usoro DVD diski.
3. Dee a DVD nchekwa DVD diski nke na-ekiri na TV.
4. tọghata DVD ka video, DVD na nchekwa ma ISO (nchebe akpaaka mwepụ).
5. Mepụta ISO oyiyi si DVD nchekwa ma ọ bụ video faịlụ.
E nwekwara ndị ọzọ na atụmatụ nke Video Converter Ultimate na ImgBurn anaghị akwado, dị ka authoring DVD menu, nbudata online video, Ndekọ ihuenyo video, video edezi, converting audio, wdg
Jiri ImgBurn Alternative Ọkụ DVD na Windows
Nzọụkwụ 1. Tinye media faịlụ ka ImgBurn Alternative
Mgbe arụnyere a ọzọ omume na-ImgBurn, ibubata faịlụ dabere na dị iche iche aga-eme. All dị ihe ga-apụta dị thumbnail on ekpe panel na dị ka ihe na akara ngosi na o kwere omume DVD menu. Buru n'uche na DVD5 nwere ike ịnwe banyere 4.7 GB nke videos mgbe DVD-9 banyere 8.5GB. Ma ọ dị mkpa, megharia ihe site Ịdọrọ na idobe.
Ibu Ibu DVD ma ọ bụ DVD nchekwa, ISO image, pịa "Ibu Ibu DVD" bọtịnụ.
Iji tinye video faịlụ ka ọkụ DVD ma ọ bụ mepụta ISO oyiyi ma ọ bụ DVD nchekwa, pịa "Tinye Files" button.
Mara na ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ gị bụ ọkụ DVD, ị nwere mbubata faịlụ ke "Ọkụ" interface.
Iji dezie video ona gị mkpa, ị dị nnọọ mata ihe kwukwara ihe na nri pịa ya, mgbe ahụ họrọ Dezie nhọrọ maka video edezi ngwaọrụ dị ka cropping, trimming, n'usoro n'usoro, watermark, mmetụta, wdg
Niile ewu mmepụta formats na-akwado, gụnyere ọ bụla mgbe video usoro (MP4, MOV, AVI, wdg), DVD diski, DVD nchekwa, ISO oyiyi na .dvdmedia (Mac naanị). Iji tọghata ndị ọzọ video ma ọ bụ ọdịyo format, ị nwere ike họrọ outut format site ọkụkụ format akara ngosi nke "tọghata" interface.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ DVD, ke "Ọkụ" interface, see "ịgbanwe Template" bọtịnụ chepụtara gị DVD menu. Ọ bụrụ na ị na-achọghị a menu, dị họrọ "Ọ dịghị NchNhr".
Nzọụkwụ 3. Preview na-amalite ntughari
Jide n'aka na ihe niile bụ zuru okè site Michael gị video ke preview window. Mgbe ị dị njikere, pịa "tọghata" ma ọ bụ "Ọkụ" button otú usoro ihe omume ga-akpaghị aka mezue aga-eme.
Mere. Ọ bụ naanị na mfe iji a ImgBurn ọzọ. Download ya nwere free ikpe ruo ụbọchị 30. Watermark ga-atụkwasịkwara mmepụta video na ikpe version. Order wepụ watermark na ndụ free nweta nkwalite oru nkwado gụnyere!
Top 10 DVDFab Alternatives iji tọghata DVD iche iche Video Format